कुन तत्व कति ? पाइन्छ, काजुमा जान्नुहाेस् ! नियमित काजुकाे प्रयाेग गर्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाकाे बारेमा ! – Samacharpati Samacharpati कुन तत्व कति ? पाइन्छ, काजुमा जान्नुहाेस् ! नियमित काजुकाे प्रयाेग गर्दा स्वास्थ्यमा हुने फाइदाकाे बारेमा ! – Samacharpati
काठमान्डाैँ, १४ कार्तिक । ड्राइ फ्रुटको राजा मानिने काजु सबै उमेर समूहको मानव जीवनलाई फाइदा पुर्याउने खाद्य हो । थोरै खादा पनि धेरै फाइदा पुर्‍याउने काजुमा मेग्निसियम, कपर, आइरन, पोटासियम लगायतका तत्व भरपुर मात्रामा पाइन्छ । यी तत्वले शरीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ । त्यसैले हरेक दिन दुई या तीन पिस मात्र पनि काजुको सेवन स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । काजुलाई ऊर्जाको राम्रो स्रोत मानिन्छ । केही काम नगर्दा पनि थकान महसुस हुन्छ अथवा काम गर्ने मुड बन्दैन भने काजु खानाले शरीरमा ऊर्जा थपिन गई फूर्ती आउँछ ।
– कोलेस्टेरोल घटाउन सहयोग पुर्याउँछ ।
गल्याङमा बिपन्न परिवारका लागि आवास निर्माण कार्यक्रमको शुभारम्भ